Però · Oktobra, 2017 · Global Voices teny Malagasy
Però · Oktobra, 2017
Tantara mikasika ny Però tamin'ny Oktobra, 2017
Mediam-bahoaka 21 Oktobra 2017
Nitarika korontana ny vaovao milaza fa feso 3000 no hita maty tamin'ny taona 2012 teny amin'ireo morontsiraka avaratri Però. Mampiasa ny tambajotra sosialy ireo Peroviana sy mpikatroka, tsy hoe fotsiny ho fampahafantarana ny fisian'ilay fandringanana sy hanairana ny saina, fa koa mba hanadihadiana izay antony.
Però: Mifaninana Hahazo Loka Ny Lahatsary Fanadihadiana Iray Mikasika Ny Fampianarana Ambanivohitra
Fampandrosoana 19 Oktobra 2017
Mampahafantatra antsika mikasika ny fizaran'ny horonantsary fanadihadiany fohy izay maharitra 6 minitra 'Camino a la Escuela' ilay mpanatontosa Humberto Saco , izay ho alefa ao amin'ny Current TV ao anatin'ny fifaninanana Seed of Tolerance ; fifaninanana iray natao ho an'ny mpanao gazety sy ny mpamokatra sarimihetsika...
Mediam-bahoaka 17 Oktobra 2017
Mediam-bahoaka 13 Oktobra 2017
Nahatohina an'i Amerika Latina Ny Famonoan'ny Mpamily Taksy Cabify An'i Mara Castilla
Meksika 09 Oktobra 2017
Tohina tamin'ny famonoana an'i Mara Castilla i Meksika sy ny firenena Amerika Latina hafa izay nizara ny hatezerany manoloana ity tranga famonoana vehivavy vaovao ity.
Mampitandrina Momba Ny Fanondranana Olona An-tsokosoko Ny Fanentanana Ao Amin'ny Media Sosialy Ao Però
Hevitra 05 Oktobra 2017
Nanao ny fanentanana "Que no te encuentren" (Aza avela hahita anao ry zareo) ny Minisiteran'ny Raharaha Anatiny Peroviana mba hiadiana amin'ny fanondranana olona an-tsokosoko ao Però.
Fanatanjahantena 03 Oktobra 2017